Concerta vs Vyvanse: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण चेकआउट कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Concerta vs Vyvanse: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
कन्सर्ट्टा र Vyvanse औषधि हो कि ध्यान घाटा hyperactivity विकार (ADHD) को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। तिनीहरू उत्तेजकका रूपमा चिनिने औषधीहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छन्। उत्तेजकहरूले मस्तिष्कमा केही न्यूरोट्रान्समिटरहरूको प्रभाव बढाउँदै काम गर्दछन्। डोपामाइन र नोरेपाइनफ्रिन जस्ता न्यूरो ट्रान्समिटरहरू बढाउँदै, ADHD भएको व्यक्तिले उनीहरूको ध्यान सुधार गर्न सक्षम हुन्छ।
कन्सर्ट्टा (कन्सर्ट क्या हो?) मेथिलफिनिडेटको ब्रान्ड नाम हो। एफडीएले affected देखि 65 65 वर्ष उमेर सम्मका प्रभावित व्यक्तिहरूमा एडीएचडीको उपचार गर्न अनुमोदन गरेको छ। Concerta एक विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट को रूप मा तैयार किया जाता है। १ mg मिलीग्राम, २ 27 मिलीग्राम, mg 36 मिलीग्राम, र mg 54 मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटहरू उपलब्ध छन्। कन्सर्टाको प्रशासन पछि, प्रभावहरू १२ घण्टासम्म रहन सक्दछ।
कन्सर्ट्टा ट्याब्लेटमा दुई तहहरू छन् जुन यसले चाँडै र लामो समय अवधिमा प्रभावहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। एडीएचडी लक्षणबाट राहत पहिलो तह विघटन भएपछि एक घण्टा भित्रै सुरु हुन सक्छ। दोस्रो लेयर त्यसपछि to देखि hours घण्टा भन्दा बढि औषधि जारी गर्दछ। यस तरीकाले एक व्यक्ति दिनभरि अधिक लगातार प्रभावहरू अनुभव गर्न सक्दछ।
कुनै चिकित्सा बीमा छैन र एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ
Vyvanse (Vyvanse के हो?) Lisdexamfetamine को ब्रान्ड नाम हो। यो ADHD को उपचार गर्नका साथै वयस्कहरूमा मध्यमदेखि गम्भीर द्वि घातुमान खाने डिसअर्डर (बीईडी) को उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। Vyvanse एक 10 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, वा mg० मिलीग्राम मौखिक क्याप्सूलको रूपमा लिन सकिन्छ। यो १० मिलिग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, वा mg० मिलीग्राम चवाबल ट्याब्लेटको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
कन्सर्टा विपरीत, Vyvanse dextroamphetamine को लागी एक प्रोड्रग हो। अर्को शब्दहरुमा, यो सक्रिय घटक गठन गर्न को लागी शरीर मा प्रक्रिया गर्नु पर्छ। Vyvanse को प्रभावहरु २ घण्टा भित्र र १ hours घण्टा सम्म महसुस गर्न सकिन्छ।
Vyvanse मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Vyvanse मूल्य अलर्ट को लागी साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अमेरिका मा अधिक तौल भएका मानिसहरुको प्रतिशत
कन्सर्टटा बनाम Vyvanse साइड साइड साइड तुलना द्वारा
कन्सर्ट र Vyvanse केही अद्वितीय भिन्नता संग समान औषधी हो। तिनीहरूको समान प्रयोगहरूको कारण, उनीहरूका फरक गुणहरूबारे पनि सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यी समानताहरू र भिन्नताहरू तल फेला पार्न सकिन्छ।
ध्यान घाटा हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर (ADHD)
मध्यम देखि गम्भीर द्वि घातुमान खाने डिसअर्डर (BED)
भोक कम भयो
असामान्य मुड वा व्यवहार
बढेको मुटुको दर
मौखिक ट्याब्लेट, chewable
3030० (प्रति tablets० ट्याब्लेट)
$ 1$१ (प्रति cap० क्याप्सूल)
सोडियम एसिड फास्फेट
कन्सर्टा गर्भावस्था कोटि सी मा छ। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा कन्सर्टा लिने सम्बन्धमा एक चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
Vyvanse गर्भावस्था कोटि सी मा छ। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा Vyvanse लिने बारे एक चिकित्सकको परामर्श
कन्सर्ट्टा र Vyvanse प्रभावित व्यक्तिहरूमा ADHD उपचार गर्न समान काम गर्दछ। Vyvanse ले मध्यम देखि गम्भीर द्वि घातुमान खाने डिसअर्डरको उपचार गर्न सक्छ। दुबै औषधीको समान साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तर्क्रिया छ। उदाहरण को लागी, उनीहरुलाई बढि रक्तचाप र कहिलेकाहिँ मृत्युको सम्भावनाको कारणले MAO इनहिबिटर नामक औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
दुवै कन्सर्ट्टा र Vyvanse प्रभाव उत्पादन गर्दछ जुन सम्पूर्ण दिनसम्म रहन्छ। यद्यपि कन्सर्टटा विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा बनेको छ जबकि भ्याभन्से प्रोड्रग हो। प्रभावको तिनीहरूको लामो अवधि को कारण, कन्सर्ट्टा र Vyvanse सामान्यतया दैनिक एक पटक गरिन्छ।
Concerta र Vyvanse अनुसूची II ड्रग्स हो कि दुरुपयोग र निर्भरता को लागी एक सम्भावित बोक्छ। तसर्थ, कुनै एक औषधि को प्रयोग एक डाक्टर द्वारा अनुगमन गर्न आवश्यक छ। तपाईको समग्र अवस्थाको बारेमा डाक्टरसँग छलफल गर्न महत्वपूर्ण छ सबै भन्दा उपयुक्त औषधी निर्धारित गर्न।
ग्रीष्मकालीन उदासी सामना गर्न कसरी
यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो औषधि चेकलिस्ट पूरा गर्न निश्चित गर्नुहोस्
कहिले सम्म तपाइँ उजागर पछि फ्लू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
खोकी बाट छुटकारा पाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
कसरी पोस्ट नाक ड्रिप बाट राती खोकी रोक्न
म कब्जियत को लागी स्वाभाविक रूपले के लिन सक्छु
यो रक्सी संग ibuprofen लिन सुरक्षित छ
plan२ घन्टा पछि पनि काम गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ
कुकुरहरु को लागी काउन्टर एलर्जी औषधि मा